Kuyerera Meter Vagadziri - China Kuyerera Meter Fekitori & Vatengesi
Precession Vortex kuyerera mita inogona kushandiswa sechinhu chakanakira peturu, makemikari, simba, simbi uye mamwe maindasitiri, iine mashandiro ekuyerera, tembiricha uye kumanikidzwa kuona mune imwe, uye tembiricha, kumanikidza uye otomatiki muripo.
Gesi Turbine Inoyerera Meter
Gesi Turbine Flowmeter inosanganisa gasi mechanics, fluid mechanics, electromagnetism uye dzimwe dzidziso kukudziridza chizvarwa chitsva chegesi chaiyo metering zviridzwa, yakanakisa yakaderera kumanikidza uye yakanyanya kumanikidza metering mashandiro, akasiyana maseru ekuburitsa nzira uye yakaderera kunzwisisika kune inoyerera nyonganiso. gasi chaiwo, gasi remarasha, gasi rakanyungudutswa, mwenje wehydrocarbon gasi uye imwe gasi kuyerwa.
Thermal gasi simbi inoyerera mita yakagadzirirwa padanho rekupararira kwekushisa, uye inotora nzira yekugara kusiyanisa tembiricha yekuyera kuyerera kwegasi. Iine zvakanakira diki saizi, kuiswa kuri nyore, kuvimbika kwakanyanya uye kurongeka kwepamusoro, nezvimwe.
Vhoriyumu kuyerera chinoshandura imvura inoyerera metering inovandudzwa yakagadzirwa nekambani yedu. Liquid turbine, elliptical giya, yakapetana rotor uye imwe volumetric kuyerera mamita.
Akangwara vortex converter ndiyo nyowani vortex flowmeter yakasanganiswa wedunhu yakagadzirwa nekambani yedu. Iyo inoshandura inogona kushandiswa sechinhu chakanakira peturu, chemakemikari, simba, simbi uye mamwe maindasitiri, iine mashandiro ekuyerera, kupisa uye kuona kumanikidzwa mune imwe, uye tembiricha, kumanikidza uye otomatiki muripo.